Japana: Ndeha Hampitaha an’i Barack Obama Sy Taro Aso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2018 8:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Sahala amin'ireo firenena hafa rehetra eto amin'izao tontolo izao, Japana, izay anisan'ireo mpiara-dalana tena matanjaka indrindra amin'i Etazonia ao Azia, dia nanaraka akaiky ny fifidianana ny Filoham-pirenena Obama. Navoaka, nadika [teny japoney] ny kabariny tamin'ny fanokanana (izay, navoaka niaraka tamn'ireo lahateny hafa nataony tamin'ny fampielezankevitra, dia tena nalaza tokoa ka nahatonga azy ho lasa ‘bestseller’ ary nampiasaina ho toy ny boky fianarana teny anglisy [angl] any an-tsekoly) ary nanehoana hevitra [teny japoney] antsakany sy andavany tamin'ireo media japoney sy ireo fandaharana tanaty fahitalavitra japoney. Natoraly be izany raha toa marobe ireo blaogera manao fampitahana ny Filoham-pirenena Amerikana sy ny Praiminisitra japoney, Tarō Asō (麻生太郎).
Tsy hoe ny laza ratsin'ny Praiminisitra japoney (teny anglisy) akory no mbola fahagagana ho an'ny rehetra, raha raisina ny hoe ireo fanadihadiana (teny anglisy) no mitondra porofo mikasika izany tao anatin'ny volana maro. Fa tato anatin'ireo andro vitsivitsy farany teo, hatramin'ny nirohotan'ireo olona an-tapitrisany teny an-kianja, tao anatin'ireo toerana fisotroana ary ireo fandraisam-bahiny mba hihaino ny tenin'ilay Filoham-pirenena vao avy voafidy, ary indray mandeha ambonin'izay, nasongadina tamin'ny fomba tsy ampy fieritreretana ny tsy fisiana herimpanahy ao amin'i Taro Asō (ary, amin'ny ankapobeny, ireo japoney mpanao politika hafa ihany koa).
Tamin'ny alalan'ny fianarana an'ireo fanehoankevitra tao anatin'ny lahatenin'izy ireny, dia notsipihin'ny blaogera Masablog hoe hatraiza ireo fahasamihafàna misy amin'ireo lehilahy mpanao politika roa ireo no tena mivandravandra:
Ho an'ireo Amerikana, ny fiovan'ny filoham-pirenena dia tranga iray tena manan-danja izay manova ny zavatra rehetra (araka ny hevitro).
Ao Japana, anefa, efa miha malemy sahady ny fiantraikan'ny Praiminisitra Asō.
Ny mahasamihafa an'i Obama sy Asō voalohany indrindra dia ny [fampiasana ny] “isika” fa tsy ny hoe “izaho”. Manomboka amin'ny “isika” ny lahatenin'i Obama, sahala amin'ny hoe “Tsy maintsy manao an'izatsy isika… Haintsika izany”. Mifanohitra amin'izay kosa, ireo [lahateny] an'ny Praminisitra Asō manomboka amin'ny “izaho”. Ary ny lahateny izay nambarany mba ho lasa Praminisitra izy dia karazana hoe “Izaho, Taro Asō…” na “Manana alalàna handrava [ny Diète] aho…” Ao anatin'io sehatra io mivoitra tsara ny fahasamihafàna.
Lafy maro midadasika kokoa no andinihan'ny id: kiku18-rak, an'ireo olona roa ara-politika ireo. Mivoitra fa endrika ivelany fotsiny ny halehiben'ny politika sy ny maha-olona an'i Taro Asō .
.Izay hosoratako dia tsy inona fa ny hevitro manokana ary miainga fotsiny avy amin'izay azoko nojerena tamin'ny fahitalavitra, nefa ny tiako hatao, dia ny hanoratra an'ireo fahasamihafàna vitsivitsy misy amin'i Obama sy Aso, araka izay ahitako azy.
1 Ilay olona izay malaza (Obama) sy ilay fahavalon'ny vahoaka (Asō)
2 Ilay olon'ny politika izay [miasa] ho an'ny rehetra sy ilay olon'ny politika [izay miasa] ho an'ny vondron'olona iray manana fahefana
3 Ilay olona izay hajain'ny rehetra manerantany ary ilay olona izay tsy hajaina akory na ao amin'ny fireneny aza
4 Ilay olona izay afaka manaporofo ny fihetseham-pony amin'ny hafa ary ilay olona izay tsy miraharaha azy ireny
5 Ilay olona izay mahay mampita ireo heviny ary ilay olona izay misitery ho an'ny maro ny fisainany
6 Ilay olona iray manana toetra ary ilay olona iray izay ao anatina toetra tsy hay faritana
Teo ampanoratana an'io, menatra ny tenako aho amin'ny maha japoney ahy.
Amin'ny lafiny iray manana liona, ary amin'ny lafiny hafa, lalitra.
Na ahoana na ahoana, niray hina manodidina ny Filoha Obama i Amerika, ary rehefa manomboka mihetsika manaraka zotra iray tsara izy, efa dingana iray mandroso izay ho an'izao tontolo izao.
Tokony hanova ny fomba fitarihany ihany koa i Japana, saingy ny zaza ampihantaina tafahoatra tsy hamela mihitsy ny seza ifikirany.
Toy izay hita matetka, mamporisika koa an'ireo izay manao an'io ho zavatra hieritreretana ny olany sy ny fomba hanamàna azy ireo fampitahana ireo. Amin'ity tranga ity, ampitahaina i Japana sy i Etazonia. Ireo blaogera sasantsasany tena mahazo fa, ho an'i Japana ihany koa, tonga ny fotoana fanovàna, ary ireo fifidianana solombavambahoaka ho avy (teny anglisy) dia mety ho teboka fiaingana.
I Hidenori Kusakari (草刈 秀紀), ohatra, nanoratra hoe:
Nanambara i Obama fa hitondra ny feon'ny vahoaka ao amin'ny Trano Fotsy. Etsy ankilany, manao tsinontsinona ny feon'ny vahoaka i Asō ary manohy mametraka zavatra vaovao. Mandray zotra mifanohitra ny ho avin'i Japana sy Etazonia.
I Etazonia, izay ahitana karazana foko samihafa miara-monina, ary i Japana, misy vahoaka tokana.
Noho izany manakaiky ny farany ny Antoko Liberaly Demokratika, ho aiza i Japana?
Hatraiza isika no hosarihan'i Obama ?
Tsy tafahoatra ny filazàna fa amin'ireo fifidianana solombavambahoaka ho avy amin'ity taona ity, ny ho avin'i Japana no ho tapahana
Maneho an'io faharesendahatra amin'ny filàna fanovàna ifotony io, ho an'ny tombontsoan'ny firenena ihany koa i ki2naru.
Tao Japana, rehefa nandimby an'i Fukuda teo amin'ny toeran'ny maha-Praiminisitra i Asō, samy nanana fanantenana be avokoa ny tsirairay, niaraka tamin'ny fahatsapana fa somary hafa kely izy, izy izay manam-pitiavana be ny Akihabara (teny anglisy). Kanefa, rehefa tena tafapetraka tamin'ny toerany ny rehetra, izao no nitranga: ny fikorontanana tao amin'ny Antoko Liberaly-Demokraty, ireo fepetra ara-politika sy ekonomika tsy misy dikany.
Ireo mpanao politika, mpitana birao ary ireo lehiben'ny indostria, mpiray tsikombakomba avokoa izy rehetra ireo mba tsy hifanelingelenana. Resy lahatra aho fa ilainany revolisiona ara-drafitra feno fahasahiana mba hanatsarana kely an'ity firenena ity. Tsy fanarahana fitsaboana ara-pahasalamana no ilaina, fa fandidiana, sa tsy izany ve?